अब को होला नेपालको प्रधानमन्त्री | Rapti Samachar Weekly
अब को होला नेपालको प्रधानमन्त्री
February 5, 2013 | Filed under: ताजा समाचार | Posted by: chandrastha
अहिले मुलुक २९ आंै प्रधानमन्त्रीको खोजीमा छ । नेपालमा १६९ वर्षको इतिहासमा २८ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । माथवर सिंहको पालादेखि प्रधानमन्त्रीको पद श्रृजना भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको पद स्थापना भएपछि नेपालमा प्रधानमन्त्री चयनका विधि पनि अनेक रहे । प्रधानमन्त्रीको विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्था लिने हो भने राणाकाल, २००७ सालदेखि ०१७ साल ०१७ पछि पञ्चायती काल, २०३६ पछि पञ्चायती व्यवस्था सुधारिएको काल, ०४७ पछि र गणतन्त्र घोषणा भएपछिका समयहरुमा बनेका प्रधानमन्त्रीका बारेमा अध्ययन गर्दा सबै भन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बन्न सफल राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा हुन् । उनी २९ वर्षसम्म यस मुलुकमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा प्रधानमन्त्रीकै लागि राजनैतिक दलहरुको विवाद, झगडा र सडक आन्दोलन समेत हुने गरेको छ । इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने १०० वर्षलाई छाडेर ६९ वर्षलाई मात्र लिने हो भने यस अवधिमा बनेका प्रधानमन्त्रीका बारेमा र त्यस अवधिमा भएका प्रधानमन्त्रीले गरेका विकास, देशमा गरेको आर्थिक उन्नति, वैदेशिक सम्वन्ध, सडक विस्तार, खानेपानीको व्यवस्था, विजुली बत्तीको सुरुवात र शिक्षा, स्वास्थ्यका बारेमा भन्नसक्ने अझै पनि नागरिकहरु बचेका छन् । २००७ सालपछि बनेका प्रधानमन्त्रीका बारेमा भन्नसक्ने नेपाली नागरिक त हामी सबै नै छांै । कस्तो विकास गरे त हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले ? हामीलाई थाहा छ दरबारसँग साँठगाँठ गरेर ०७ सालमा ल्याएको प्रजातन्त्र दरबारलाई बुझाउन खोजेनन् कि, पञ्चायति व्यवस्थालाई पुन ब्यूताउन तराईको जगंल सखाप पारेनन् कि, पञ्चायत जोगाइराख्न सुखानीसेखी पिस्कर हत्या काण्ड गराएनन् कि यो त एउटा उदारण मात्र हो ।
२०४६ सालदेखि बनेका प्रधानमन्त्रीका अनुहार हेरांै त…कुन प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको चाहना अनुरुप देश सञ्चालन गरे ? ०४६ पछि बनेका दुईजना प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रा सामु हुनुहुन्न । बाँकी सबै अझै पनि प्रधानमन्त्रीकै लागि भिड्दै हुनुहुन्छ । एउटा दलले अर्को दललाई आरोप प्रतिआरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री बन्ने होड चल्न थालेको छ । पछिल्लो चरणमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सबै प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा सबै दलको अवस्था चाँही उस्तै देखिएको छ । सबै दल र प्रधानमन्त्रीहरुको समिक्षा गर्ने हो भने आम जनताका लागि प्रधानमन्त्री कुनै पनि नबनेको आभास हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा जति प्रधानमन्त्रीहरु भय सबै भारतमुखी बने । चाहे स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला अथवा माधव नेपाल, झलकनाथ खनाल, प्रचण्डदेखि अहिलेका डा. बाबुराम भट्टराई सबै भारतमुखी हुन् । यिनीहरु कसैले पनि भारतको चाहना विपरित देशलाई अगाडि बढाउन सकेनन् ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम नेपालको संविधान २०६३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । साँच्चै भन्दा संविधान अनुसार चलेको भए निवर्तमान प्रधानमन्त्री भइसक्दथे । तर, उनलाई संविधानको भन्दा पनि पदको ममता बढी भएको छ । सत्तामा नरहेका दलहरु ले जेसुकै भने पनि उनलाई वास्ता छैन । सरकारमा पुगेपछि प्रतिपंक्ष को आवाज नसुन्ने प्रचलन अहिले मात्र होइन यो नेपालका लागि पुरानो रोग भएको छ । १० वर्ष युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड पशुपतिनाथको पुजारी काण्ड र नेपाली सेनाको कटुवाल प्रकरणले कुर्सी नै छाड्नु परेको थियो । त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहमतिको सरकारको नाममा उनले पनि राजीनामा दिएको लामो समयसम्म सरकारको कुर्सी छाडेनन् । त्यतिबेला उनलाई एमाओवादीका नेता प्रचण्डले विषवृक्ष को आरोप समेत लगाएका थिए । अहिलेको अवस्था पनि उस्तै छ । सरकार गठन प्रक्रियामा सहमति भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोप हुँदाहँुदै दैलेख काण्डले झन् प्रधानमन्त्रीप्रति जनताको आस्थानै घटेको छ । देशको प्रधानमन्त्रीलाई आन्दोलनकारी दलहरुले जिल्लामा नै छिर्न नदिने कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
नेपालका ठूला भनिने राजनैतिक दलहरुनै भारतमुखी छन् । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र जनताको हीतका योजना नीतिहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन । जुन दलको सरकार बने पनि देश चलाउन भारतले नै दिशा निर्देश गर्दै आएको छ । झर्रो भाषामा भन्नुपर्दा नेपालका शासकहरु भारतीय बिस्तरवादको गोटी बन्दै आइरहेका छन् । पदमा पुग्नका लागि आफ्नो इतिहास, इमान्दारी, सङ्घर्ष आदि कुराहरुलाई सबैले तिलाञ्जली दिइसकेका छन् । यसको उदारणको पात्र मात्र बनेका हुन् बावुराम । प्रधानमन्त्री बन्ना साथ सबैतर्फबाट स्यावासी पाएका बाबुराम यति चाँडै जनताको नजरबाट खस्कने साेंच कसैमा थिएन । मुस्ताङ् गाडीले बाबुरामलाई उपल्लो हाइटमा पु¥याएको थियो । तिनै बाबुराम आज हेलिकप्टरमा पार्टीको काममा जनतालाई छल्दै जिल्ला दौडाहमा हिड्न थालेका छन् । आफ्ना नातागोतालाई राज्यले दिनसक्ने र मिल्ने कुनै कुरा बाँकी राखेका छैनन् बाबुरामले अनि जनताबाट के अपेक्षा लिने उनले । तर, पनि बाबुराम आत्तिएका छैनन् । जुन जिल्लामा पुगेका छन् । त्यही जिल्लामा आजभोलि उनको विरुद्ध नारावाजी, कालो झण्डा र ढुङ्गामुडा हुन थालेको छ । हेलिकप्टरको सयर र सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा बाबुरामको यात्रा रोकिएको छैन ।
एमाले, कांग्रेस र अन्य दलहरुले थालेको विरोध आन्दोलन चर्किरहेको छ । सहमतिको लागि सबै दलहरुले आफ्नो विरोधका आवाज आन्दोलनमा व्यक्त गरेका छन् । आम जनतालाई दलहरुको आन्दोलनप्रति चासो भन्दा पनि नकरात्मक साेंचको विकास हन थालेको छ । आखिर दलहरुले आम जनताका लागि के गरे त..? जनचाहना अनुसारको काम कुनै पनि दलले गर्न नसक्दा सबै क्षेत्रमा दलप्रति नैराश्य उत्पन्न भएको छ । तैपनि देशलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ । यस्तो अवस्थामा को बन्ला त प्रधानमन्त्री यो देशको….?
प्रधानमन्त्री सबै दललाई चाहिएको छ । कांग्रेस, एमाले र गठवन्धन सरकार बीच सहमति हुन नसकेपछि अब त साना दलहरु ले समेत प्रधानमन्त्रीको ख्वाप देख्न थालेका छन् । कतिपय दलको छायाको पर्दामा वसेका व्यक्तिहरु समेत आफूलाई स्वतन्त्रको संज्ञा दिँदै एमाओवादीलाई स्वतन्त्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताप समेत आउन थालेको छ । तर, पनि सहमतिका कुराहरु दलहरुले निकाल्दै छन् । आखिर सहमतिविना सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । जति सक्दो चाँडो दलहरुले सहमतिको बाटो अवलम्वन गर्नुपर्दछ । अनिमात्र बन्दछ सरकार त्यसपछि नेपालीहरुले पाउन सक्दछन् २९ औं प्रधानमन्त्री ।